ख’तरा बढेपछि पुनः नियम परिबर्तन गर्दै प्रशानन, अब सवारीसाधनलाइ पास नदिने, लकडाउनलाइ थप कडा बनाउदै ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारख’तरा बढेपछि पुनः नियम परिबर्तन गर्दै प्रशानन, अब सवारीसाधनलाइ पास नदिने, लकडाउनलाइ थप कडा बनाउदै !
ख’तरा बढेपछि पुनः नियम परिबर्तन गर्दै प्रशानन, अब सवारीसाधनलाइ पास नदिने, लकडाउनलाइ थप कडा बनाउदै !
काठमाडौँ । निषेधाज्ञामा पनि काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न सडकचोक तथा सुरक्षा चेकजाँच स्थलमा ‘ट्राफिक जाम’ देख्दा स्वयं सुरक्षाकर्मीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् ।कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको सोमबार पाँचौँ दिन हो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहालले अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधनलाई समेत सञ्चालन गर्न दिँदा स’मस्या आएको बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विवाह, अस्पताल, खाद्य र तरकारी बोक्ने नाममा धेरै गाडी गु’ड्ने गरेका छन् ।
यसैबीच काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले निषेधाज्ञामा अत्यावश्यकबाहेकका अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रो’क लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । यही १६ गतेबाट जारी एक हप्ता लामो निषेधाज्ञा २२ गते राति १२ बजेपछि पुनः थप गरी वैशाख मसान्तसम्म पु¥याइने भएको छ । “निषेधाज्ञा एक साता लम्ब्याएर मात्र भएन । थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने विषयमा पनि निर्णय हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले मृ’त्यु सं’स्कार र अत्यन्तै जरुरी कामका लागिबाहेक अन्यका लागि सवारी पासको व्यवस्था ह’टाइएको जानकारी दिनुभयो । अत्यावश्यक काम परेमा प्रहरी कन्ट्रोल १०० र ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल १०३ को व्यवस्था गरिएको छ । गोरखापत्रमा यो खबर छ ।